बियर र ह्विस्की बीच के सम्बन्ध छ? - उद्योग समाचार-गोआलोङ रक्सी (समूह)
बियर र व्हिस्की बीच के सम्बन्ध छ?
संसारमा सबैभन्दा प्रारम्भिक बियर छैठौं शताब्दी ईसा पूर्वमा मेसोपोटामियाको मैदानमा देखा पर्‍यो। त्यसबेला मानिसहरूले यसलाई सिकारु भन्थे र यसलाई पिउने नभई खानाको रूपमा लिन्थे। बियर डिस्टिलिंगको आधारभूत चरणहरू हुन्:
जौलाई पानीमा भिजाउनुहोस्, तिनीहरूलाई अंकुराउन र पछि सुकाउन दिनुहोस्, माल्टमा रहेको एमाइलेज किण्वन प्रक्रियाको क्रममा अल्कोहलमा परिणत हुनेछ।
माल्टलाई मोटो पाउडरमा मिसाउनुहोस्, पानी थप्नुहोस् र निरन्तर हलचल गर्नुहोस्, त्यसपछि तताउनुहोस् र खरानी बनाउन उमाल्नुहोस्।
3. सुगन्ध थप्दै
फेरि उमाल्न हप्स र अन्य मसाले थप्नुहोस्।
अन्तमा, खमीर थप्नुहोस् र चिनीलाई अल्कोहल र कार्बन डाइअक्साइडमा रूपान्तरण गर्नुहोस्, र वर्ट बियर बन्छ।
व्हिस्की र बियरको saccharification चरणहरू लगभग समान छन् (हप्स थप्न बिना ह्विस्की बाहेक)। सबैभन्दा ठूलो भिन्नता भनेको व्हिस्कीको वर्टको हो, जसलाई उमालेको आवश्यक पर्दैन, ताकि किण्वनको समयमा थप जटिल रासायनिक प्रतिक्रिया एकै साथ हुनेछ। त्यसैले ह्विस्कीमा बियर भन्दा धेरै अद्वितीय सुगन्ध छ।
ह्वीस्की सेक्रेरिफिकेशनको आधारभूत चरणहरू पिचिएको माल्टिङलाई स्याक्रिफिकेशन ट्याङ्कीमा हाल्नु र तातो पानीमा मिसाउनु हो। निरन्तर हलचलले स्टार्चलाई चिनीमा परिणत गर्दछ जुन किण्वन गर्न सजिलो हुन्छ, र अन्तमा रक्सी उत्पादन गर्न सकिन्छ। saccharification चरण को समयमा, पानी को तापमान 65 डिग्री भन्दा बढी हुनु हुँदैन। यदि पानीको तापमान 60 डिग्री भन्दा बढि छ भने, माल्ट घडीको एमाइलेज "मृत्युको लागि जलेको" हुनेछ, आवश्यक सुगन्ध उत्पादन गर्न असमर्थ हुनेछ, र अन्तिम व्हिस्कीमा सुन्दरता सुगन्धित हुन सक्छ।
त्यसोभए व्हिस्की भनेको कुर्सीमा कुचिएको माल्ट मिलाएर र त्यसपछि डिस्टिल गर्ने परिणाम हो। व्हिस्की डिस्टिल्ड बियर हो।
अघिल्लो: एकल माल्ट व्हिस्की
अर्को: परम्परागत जौ अंकुरण र औद्योगिक जौ अंकुरण